बच्चा जन्माउने विषयमा महानायकले यसो भने.... - Darpanpost
» मनोरञ्जन अंक: 40918
बच्चा जन्माउने विषयमा महानायकले यसो भने….
बिहे कहिले गर्ने भन्ने प्रश्‍न त बन्द भयो । तर, आजभोली महानायक हमाललाई कसैले प्रश्न सोध्न पायो भने भन्छ, बच्चा कहिले ? २०१४ मा बिहे गरेको यो दम्पत्तीबाट कुनै बच्चा जन्मिएको छैन । हमालले समेत हरेक मिडिया र प्रश्न सोध्ने सुभेच्छुकहरुलाई विभिन्न किसिमका रमाइला जवाफ दिएर तर्किने गरेका छन् ।
हमालले अहिले बच्चा जन्माउने बिषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले न मधुले अपेक्षा गरेको छ, न मैलेु, हमालले फेरी थपे, अहिले कामको व्यस्तता, विभिन्न कारणले सन्तानको योजना बनाएका छैनौं, कुनै दिन त्यो निर्णय भयो भने तपाईँहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि ।
युग देखि युगसम्मबाट चलचित्र यात्रा थालनी गरेका हमालले ३ सयभन्दा धेरै चलचत्रिमा काम गरिसकेका छन् । पछिल्लो चलचित्र सकुन्तलापछि भने कुनै चलचित्रमा काम गरेका छैनन् । हमाल छिट्टै चलचित्र उद्योगमा कमब्याक गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । लोकान्तरबाट